Iiraan oo Soomaaliya ka taageeraysa kobcinta warshadaha iyo horumarinta dhaqaalaha – Radio Daljir
Iiraan oo Soomaaliya ka taageeraysa kobcinta warshadaha iyo horumarinta dhaqaalaha
Janaayo 14, 2014 3:05 b 0
Tehran, January 14, 2014 – Dowladdaha Iiran iyo Soomaaliya ayaa yeelanaya xiriir wada shaqayn ah oo aad u awood badan, kadib kulan ay ku qaateen magaalada Tehraan xubno ka wada tirsan baarlamanka labada wadan.
Wakaalada wararka ee dalka Iiraan ayaa qortay in kulankii dhex maray xubno ka tirsan baarlamanka labada wadan lagu go?aamiyey in laga wada shaqeeyo xiriir ay yeeshaan labbada dowladood.
Xubnaha baarlamanka Iiraan ayaa sheegay in Soomaaliya la yeelanayaan shaqo iyo xiriir joogta ah oo wanaagsan. Afhayeenka baarlamanka Iiraan Cali Larajaani ayaa casumaad rasmi ah u fidiyey xubnaha baarlamanka Soomaaliya ka socda.
Dowladda Iiraan ayaa wada shaqaynteeda ku salayn doonta inay Soomaaliya ka taageeraan dhinacyada dhaqaalaha iyo warshadaha.
Haweenka degmada Carmo oo soo dhoweeyey madaxwaynaha cusub ee Puntland (Dhegeyso)
Japan oo $11 milyan ugu deeqday qaxootiga kala duwan ee ku jira xeryaha dalka Itoobiya